Darren Lynn Bousman wuxuu ku wajahan yahay Filimka 'LaLaurie Mansion' Horror
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh Darren Lynn Bousman wuxuu ku wajahan yahay Filimka 'LaLaurie Mansion' Horror
by Waylon Jordan June 10, 2021
Kulul guusha guusha aarayo, gelitaankii ugu dambeeyay ee ballaarinta arkay caalamka, agaasime Darren Lynn Bousman ayaa kor u qaaday si ay u hogaamiso filimka ugu horreeya ee cusub ee la qorsheeyay ee loo yaqaan 'franchised' oo laga dhisay agagaarka sumcadda iyo taariikhda LaLaurie Mansion. Mashruuca waxaa qoraya Chad iyo Carey Hayes, oo ah qorayaasha filimkii ugu horreeyay ee Conjuring taaso.
"Ku soo biirida mashruucan waa riyo ii rumowday," ayuu Bousman ku yiri hadal aan maanta helnay. Ilaa iyo inta aan xasuusto waxaan ku mashquulsanaa waxyaabaha aan caadiga ahayn. Qof kasta oo baranaya dabeecadda sare wuxuu ogyahay halyeeyada iyo xaragada LaLaurie Mansion. Waa xurmada barakaysan ee noocyada noocan ah. Dhawaan ayaa la ii oggolaaday inaan galo guriga, oo waxaan awooday inaan halkaas la joogo walaalaha Hayes. Ma jirto wado lagu sheegi karo 72-ka saacadood gudahood gidaaradaas gudahooda. Gurigu wuu ku cunaa. Waa taariikh waa ku curyaamisaa. Walaalaha Hayes waxay farsameeyeen sheeko shucuur, shaki iyo cabsi leh oo aanan sugi karin inaan adduunka ku soo bandhigo goobtan aan la rumaysan karin.
Kaliya maahan Darren inuu yahay agaasime heer sare ah oo hal abuur leh, laakiin sidoo kale wuxuu yaqaan sida loo dhiso xayeysiin. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan isaga ku helno midkan, mana sugi karno inaan aragno waxa uu shaashadda keenayo, ”ayay walaalaha Hayes ku dareen.
Qasrigan ayaa ka xirnaa marinka dadweynaha tan iyo 1930-yadii, laakiin taasi kama hor istaagin dalxiisayaasha inay ku soo qulqulaan goobta sanad walba si ay u soo indha indheeyaan guriga ay ku nooshahay isla markaana xambaarsanayd mid ka mid ah haweenka ugu xun taariikhda. badan oo ka mid ah falalkeedii foosha xumaa. "Tijaabadii" ay ku samaysay addoommadeedii ayaa aakhirkii la ogaaday, gurigana way ka carartay wax yar ka dib.
Kooxda filimka waxaa milkiilaha iyo soo saaraha Michael Whalen uu siiyay xuquuq gaar ah goobta si ay ugu milmaan taariikhda goobta qaabab aysan weligood cidna isku dayin hadda kahor.
iHorror ayaa kugu soo dhejin doonta tan Dhismaha LaLaurie mashruuc sida faahfaahin dheeraad ah loo heli karo.
Darren Lynn BousmanHayes WalaalayaalDhismaha LaLaurieWaylon Jordan
Bisha Kibirka Xun: Qoraa / Agaasime / Dhaqdhaqaaqa ND Johnson
Ciyaarta 'Xun xun' waxay na siineysaa inaan eegno qaar ka mid ah 'Groovy Gameplay' ee Trailer-ka Cusub